Maitiro ekudzoreredza yako iPhone seyatsva pasina kurasikirwa nechinhu | IPhone nhau
Maitiro ekudzoreredza yako iPhone senge nyowani pasina kurasikirwa chero chinhu
IOS 14 inosvika uye nyowani iPhone ne iPad inosvika, uye kusahadzika kunowanzoitika kunotanga: Shandisa backup? Isu tinokuratidza maitiro ekusiya yako iPhone senge nyowani, kana kumisikidza nyowani iPhone usingashandise backup asi kupora data rese kubva kuICloud.
Kana vhezheni nyowani yeIOS yasvika, kana isu takatenga iyo iPhone nyowani kana iPad, mubvunzo unogara uchionekwa wezvekuita zvirinani: tinogadzirisa iyo nyowani iPhone tichishandisa backup yeedu yekare iPhone? Isu tinoisa iOS 14 pane vhezheni yatinayo kare? Isu tinodzosera seyatsva uye tinoshandisa backup yedu? Kushandisa backup ibasa chairo rinokwanisika pazviitiko zvakawanda, asi pane nguva dzatinoda kusiya mudziyo wedu se "nyowani", kungave nekuti isu tine yedu yekuchengetera izere, nekuti bhatiri harigare sekureba sekuda kwatingaita kana tine mhosva yatiri kuda kubvisa. Izvo zvinokwanisika kusiya yedu iPhone "yakachena" neiyo nyowani vhezheni yeIOS, kana kumisikidza yedu nyowani iPhone kubva pakutanga, asi kudzoreredza rese data iro iwo maapplication akachengeta muICloud pasina kushandisa iyo backup zvachose.
Muvhidhiyo ino tinotsanangura danho nedanho kuti tingaite sei, uye zvakanyanya kukosha, kuti tingave nechokwadi sei kuti hatisi kuzorasa data redu. Uri kunetseka nezve kurasikirwa neyako data data? WhatsApp hurukuro? Chiitiko chinobudirira? Zvakanaka haufanirwe, nekuti zvese zvakachengetwa muICloud zvakasununguka negadziriro yeparutivi, uye isu tinogona kuita kuti maapplication apore iyo data uye panguva imwechete iine iPhone nyowani kana iPad, pasina marara awakaunganidza mumwedzi yekupedzisira kana makore apfuura. Nhanho nhanho zvese zvinotsanangurwa muvhidhiyo ino zvandinovimba unowana zvinobatsira uye zvinokubatsira kuti unakirwe ne iPhone yako zvakare mukubwinya kwayo kwese.
Unogona kudhawunirodha IPSW kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Maitiro ekudzoreredza yako iPhone senge nyowani pasina kurasikirwa chero chinhu
Kana tikaita izvi uye isu tine wachi yeapuro, isu tinofanirwa kutanga tazvibvisa.
Uye kune vedu vedu vasina iCloud yakakwana yekuteedzera zvese? Mifananidzo semuenzaniso, pane yangu iPhone ini ndine mafoto kubva muna 2010 andisingade kurasikirwa kana kuti ndinofanira kuisa manyore zvakare. Mukuwedzera kune maalbum, ndangariro dzakagadzirwa, iwo maalbum akagadzirwa otomatiki achiona zviso, nezvimwe. Kana iwo maapplication asinga chengetedze muICloud, ayo anongochengetedza munharaunda ...
Kana ivo vasiri muCloud iwe unofanirwa kushandisa backup pane komputa yako
With ichi mashoko ari "Notes" anogona kuwanikwazve?
Ini ndaifanirwa kudhonza iyo iCloud backup kana ndisiri kuita yakachena kudzoreredza pasina kudhonza backup, zvese zvandaive nazvo mumanotsi hazvioneke, kutanga ndakaita kudzoreredza ndisina kopi uye hapana chandaive nacho chinowoneka manotsi ndakadzoka kudzorera uye kudzoreredza kubva kuICloud backup uye ndiwo maratidziro akaitwa manotsi kana ndikasaenda kubasa.
Sezvandakaonesa pakutanga kwevhidhiyo, unofanirwa kuona kuti une data muICloud, iwe, kuti iyo App yeNotes yakaitwa muICloud. Manotsi anodzoreredzwa pasina nyaya mune ino nyaya.
Kana iwe uine maNotes akagoneswa muICloud, hongu.
Mangwanani zvakare, manyorerwo ekushandisa kana ndinawo akaisirwa muICloud asi kana kudzoreredzwa kwaitwa sezvakaratidzwa muvhidhiyo, manyorerwo ekushandisa pakudzvanya pikicha inobuda sekunge uchaishandisa kekutanga, pasina chero data yaive nemanotsi, ini ndaifanirwa kuidzosera zvakare uye kudhonza backup kuti ndiwanezve manotsi data, yakaitwa kaviri mangwanani ano uye zvinoitika sezvandiri kuratidza, iPhone X.
Wakaedza here kuisiya kwechinguva kuitira kuti zvese zviwirirane zvishoma nezvishoma? Nekuti zvinoenderana neyako internet yekubatanidza zvinogona kutora maawa akati wandei kudzosera zvese. Ini ndinogona kusimbisa kuti maNotes anowirirana muICloud pasina matambudziko, ndanga ndichizviita kwemakore akati wandei uye ini ndine zvinyorwa zvangu zvisina kumira mushe.
Manheru akanaka, nekuti sekuratidzira kwandakaita ndizvo zvinoitika kwandiri, uye haisi nguva yekutanga kuti izvi zviitike kwandiri, nekuti chinangwa changu chaive chekuzviita nekudzosa kwakachena, ndichienda kubva kuIOS 13 kuenda kuIOS 14 asi ndaifanira kuidzorera seyatsva asi kuti ndiwanezve data remanotsi ndaifanirwa kudhonza kopi yeICloud, mira handina kuita zvakawanda sekutaura kwako asi kamwe kudzorera, isa data rese, wifi, gadzira Chiso ... nezvimwe, uye ona zvese zvakaiswa, ini ndinopinda manotsi uye sezvandino taura zvisina chinhu, tinya pikicha uye hapana kana senge sekunge ndakatanga nekushandisa kekutanga, uye haisi yangu yekutanga iPhone nekuti ini ndakatanga ne 3G, 4 S, nezvimwe. . kusvika ndamira pa iPhone X, dai ndaiziva zvechokwadi kuti yawana zvese zvandainyora, ndaizozviita zvakare asi handikwanise kusarudza, handifunge kuti imhaka yekuti manotsi andinawo akachengetedzwa neFace .. Ini ndinogadzirisa pandinoda pasina dambudziko, uye sezvandambotaura muICloud ndinazvo.
Mhoroi, vadikani shamwari, ndaita yese yekudzorera oparesheni, mubvunzo unomuka kana ichiti IPSW yakasainwa, zvinoreva here kuti ipuro rekutanga rakatakurwa nemaseva aro? vazhinji ndinotenda nekuda kwezvose
watchOS 7 inokutendera iwe kuti uchinje chinangwa cheiyo Exercise uye Standing mhete
Vagadziri vanogona ikozvino kuendesa yavo iOS uye iPadOS 14 inoenderana maapplication